shidaalka somalia | rasminews.com
November 21, 2014 shidaalka somalia
Written by rasmi on March 14, 2013 · No Comments
Waxa in badan dhagaha qofka somaliga ah ku dhici jiray in wadanka uu leyahay shidal iyo kheyrad kale balse an wax laga ogeyn cidda gacanta ku heysa arimahaas ee ah ka faaideysiga kheyradkoda .
Somalia waxa jooga shirkado caloshood u shaqeystiyaal ah oo mareykan iyo rer galbeed ay leyihiin kuwaas oo sanadihii u danbeyey ad uso galay wadanka waxayna la macamilan qoloyin ku magacaban magacyo dowladed ama magacyo mamulo goboled kuwaso ayagana ah qowleysato an ka nixin dal iyo dad hadba ku xisaabtama inta ayaga uso xarooneyso ayago an ka fakarin dhaca iyo bobka loo geysanayo dhulkooda.
Hadaba melaha la magacabay in shidal laga qudayo ama laga helay waxa ka mid ah Dooxada Dharoor oo u dhow Boosaaso.
Waxa gacanta ku haya mamul isku magacabay puntland oo ah mamulada loo sameyey Somalia in lagu boobo madama uu madax ka yahay nin lagu magacaabo faroole oo saxiixay wax yaala badan oo an dan ugu jirin dadka Somalia balse dana gaar ah ka fiirsaday .
Gobolkaas waxa si dadban gacanta ugu hayya cadowga ummada Somalia ee dowladda Ethiopia taso waxi ay rabaan ka fushtaan kana qafaashan qofkii ay u arkaan inu yahay salafi shaqayn kara ummada wax u tari kara
Sida qorshaha uu aha waxa bilihi tagay bilabaneysay qodistii ceelashii ugu horeeyay ee shidaal laga baaro Soomaaliya.
Shirkadaha Africa Oil iyo Range Resources ayaa waxay wadajir uga baarayaan shidaal goobihii horay daraasaadka loogu sameeyay ee lagu tuhunsan yahay inuu shidaal ku jira.
Waxa ay dadka qaar ay shagayan in shidalka qodistiisa uu bilowday sanadi 2008 balse hadda uu yahay waxa la iclaamiyey dhuufintiisa . Waxa taas barbarsocota in shirkadahaasi ay boob ad u wayn ay ka wadan macdan iyadana laga helo buraha ka ag dhow dhulka ay shegayan inay ka radinayaan shidal taso ay cid ay idin ka waydisten aysan jirin madama ay iyagu u madax bananyihin inay wax ka baraan dhul garaya boqolol km oo ay ku wehlin shaqadaas cid loo xulay oo khibrad u leh howlahaas si shirkadahani ajnabiga ah aysan ugu xadgudbin dhulkeena iyo kheyradkisa. Yaa ilala ka ah shidaalkaasi
waxa iska cad in mamulka puntland uusan awood u laheyn in u damaanad qado mashruucas oo ah mashruuc ad u ballaran dowladaha adunka gumeystan ay ad u daneynayaan shidal madama uu qalqal siyaasaded uu kala dhaxeyo dowlado shidaal badan soo saari jiray kuwa kalana ay ku tagnen caga fiican si ay taasi badiil ugu helaan ayey waxay ad u daneynayan in Somalia laga helo shidaal madama aysan jirin cid manta u taagan inay la xisaabtaman .
hadaba sida an horay uso xusnay amniga gud ee mamulka puntland waxa gacanta ku haya Ethiopia iyo heyado nabad sugid oo uu soo tababaray mareykanka si toos ahne uga amar qataa saraakil mareykan ah sida inta badan ay la socdan arinkas ummada muslimka ah eek u dhaqan carigaas
kuwaaso sugaya amniga shidaalka halkaas laga boobi doono hadu u hirgalo sida cadowga uu qorsheynayo .
waxa la xaqijiyey in mamulka uu qorsheynayo inuu kensado caloshood u shaqeystayaal africaan ah waxuuna mamulkaasi ugu tala galay inay u ilaliyaan inta ayaga kuso aday oo ah saami aad u yar oo iyaga lagu qancinayo maadama sida muqata mesha ay wada taganyihiin qabaail kala duwan oo la iman kara fakar ah aaway samigeni taasi faroole waxu u diyaarsaday caloshood u shaqeystiyaalki u dagalamay Macamar qadaafigi xukumi jiray libiya.
shidaalkii qaar waxa lagu bixiyey waxan ku qodnay ceelal shidaal .
qaarne waxa lagu bixiyey amniga sugayya shirkadaha iyo qalabkoda .
qaarne faroole aya siyey caloshood u shaqeystayal African ah.